Hevitra MPANOHARIANA | Aogositra 2020 |
2020-08-05 @ 17:29 in Andavanandro
Gaga sy talanjona tanteraka aho nahita amin'ny sary ao amin'ny media sosialy, ary avy amin'ny kaontin'ny Filoha mihitsy araka ny noraisiko avy amin'ny namana fa dia vahoaka sesehena no eny an'arabe miandry ilay fanampiana ahitana vary amin'ny gony omen'ny fanjakana tarihan'ny filoham-pirenena mihitsy.
Ny anton'ny fahagagana dia avy amin'ilay famerana tsy hivorian'ny olona 50 isa akory nefa ireo vahoaka hita efa an'arivony. Omaly ohatra nahitako ny sary tao amin'ny Coliséum etsy Antsonjombe, mba misy ihany ny fanajana ilay iray metatra elanelana fa androany kosa tsy misy elanelana voahaja izany intsony.
Mety ho mahatonga ny hagagana ihany koa ny tsi-fanarahana intsony izay vaovao eto an-toerana ampitain'ireo haino-vaky-jery rehetra eto Madagasikara. Tsy maharaka intsony ny fironan'ny olona. Mahita aho fa amin'iny manamorona ny arabe rehetra iny ao Antananarivo sy ny manodidina ao dia feno dia feno olona tokoa ireo toerana nifampitaina an-tohotsofina fa hisy fizarana vary amin'ny gony araka ny arentirenty.
Toa miverina indray ny fampielezankevitra ao anatin'izao fandrarana tsy hivorivoriana izao. Sary hitako no milaza fa mbola miandry ny fahatongavan'ny Filoha ny fizarana fanampiana ao amin'ny Kianja iray ao Ankadikely Ilafy raha efa dila ora iray mihoatra ny tsy fahazoana miantsena olona iray isa-tokantrano.
Fireharehana no asehon'ny sasany amin'izao fisian'ny fanampiana izao, izaho kosa mahita fa ankoatra ny ho fahasarotan'ny fiainana atsy ho atsy dia efa endriky ny fahasahiranan'ny olona no mahatonga izao firohotana tsy misy fanajana elanelana izao, ary ahiana mafy dia mafy ny fipoahana ara-tsosialy raha sanatria tsy mahazo izay nambara hozaraina ny olona.